HomeWararka MaantaXogo Muhiim Ah Oo Laga Ururiyey Taariikhda Ciyaareed Ee Kooxaha Bayern, Real Madrid, Atlético Iyo Chelsea
Kadib markii maanta lagu dhawaaqay jadwalka kooxaha isugu soo hadhay Champions League ee ay afka iska galeen Real Madrid iyo Bayern Munich oo lugta koowaad isku arki doona Bernabeu Studium, kulanka labaadna ku wada ciyaari doona garoonka Bayern, halka Chelsea iyo Atletico Madrid ay iyaguna ku horreyn doonaan Spain, kulanka labaadna Ingiriiska, ayaa waxa dib loogu noqday buugga taariikhaha naadiyadan, waxaana la soo bandhigay xogo muhiim ah oo la xidhiidha taariikh-ciyaareedka kooxahan ee sannadihii u dambeeyey.
Arrinta koowaad ayaa waxa ay tahay in labada kooxood ee u soo baxa ciyaarta kama dambaysta ah ee faynalku ay u baqooli doonaan wadanka Portugal, halkaas oo ay 24 May ku wada ciyaari doonaan garoonka kooxda Estádio do Sport Lisboa e Benfica ee kooxda Benfica.
FC Bayern München waxay ku qasban tahay inay garaacdo kooxda Real Madrid FC haddii ay doonayso inay difaacato horyaalnimada, waxaana suurtogal ah inay noqoto kooxdii koowaad ee taariikhda Yurub laba sannadood oo xidhiidh ah ku guulaysata horyaalka naadiyada Yurub UEFA Champions League.
Isku beegga maanta lagu qabtay xarunta UEFA ee Nyon, waxa xamaasad u yeelay kooxda Club Atlético de Madrid oo muddo 40 sannadood ah markii ugu horreysay timi semi-final-ka Champions League iyo Chelsea FC.
Kooxda ugu badan, waa Real Madrid oo raadinaysa inay ku guulaysato koobkan markeedii tobnaa, laakiin waxay ku beegantay FC Bayern München oo haysata shan koob, isla markaana shantii jeer ugu dambeeyey ee ay Semi-finalka ku kulmeen Real Madrid, afar jeer si xarrago leh uga saartay tartanka, markii ugu dambaysayna waxay ahayd 2012 oo garoonka Santiago Bernabeu rikoodheyaal lagu garaacay Real Madrid, sidoo kalese, kooxda reer Jarmal waxay maanka ku haysaa suurtogalnimada inaanay ka baaqsan karin guul-darradii tunka u saartay sannadkii 2012.
Chelsea FC waxa hortaagan kooxda ka dhisan caasimadda Spain ee Club Atlético de Madrid laguna naanayso The Rojiblancos, oo si aanu shaki ku jirin ereygeeda iyo awooddeeda u meelmarinaysa. Atletico waligeed kuma ay guulaysatay tartanka Champions League waxaanay ahayd markii ugu dambaysay sannadkii 1974 markaas oo ay Bayern Munich ka reebtay tartanka. Waxay taariikhdu maanta xasuusisay taageereyaasha sannadkii 2012 markaas oo ay Atletico Madrid 4-1 ku garaacday Chelsea, isla markaana ay gacanta ku dhigtay koobka UEFA Super Cup.
Isku aadkii maanta ee Nyon, waxa samaynayay Luis Figo oo ah safiirka UEFA ee sannadkan iyo Xoghayaha guud ee EUFA, Mr. Gianni Infantino, waxaanu madasha ka sheegay Mr. Gianni in uu sannadkan xamaasad dheeraad ah leeyahay tartanku maadaama ay isugu soo hadheen afar kooxood oo saddex ka mid ahi ay ku guulaysteen isku geyn 15 koob, halka kooxda kalena aanay waxba arag. “Afartan kooxood ee isugu soo hadhay Champions League waxa la yaab ah inay saddex ka mid ahi guulaysteen koobkan isku-geyn 15 jeer, halka kooxda kale Atletico Madrid aanay marna ka soo muuqanin heerkan tan iyo 1974” ayuu yidhi xoghayaha guud Mr Infantino.
–	Kooxda Real Madrid FC, waxay timi semi-finalka tartanka UEFA Champions League 24 jeer, waxaanay guulaystay 12 ka mid ah, halka 12-ka kalena laga badiyey.
–	Markii ugu dambeeyey ee ay iska soo xaadirisay Semi-final-ku wuxuu ahaa xili-ciyaareedkii 2012/2013, markaas oo 3-4 lagu dubtay, iyadoo kooxda ree Jarmal ee Borussia Dortmund ay garaacday.
–	Sannadkan Real Madrid FC ciyaarihii ay yeelatay Champions League, waxay badisay 8 jeer, waxay barbaraysay hal kulan, waxaana laga badiyey hal ciyaar, waxaanay dhalisay 32 gool, iyadana waxa laga dhaliyey 9 gool.
–	Ciyaaryahanka ugu gool-dhalinta badan tartanku sannadkan waxa uu u ciyaaraa Real Madrid, waana Cristiano Ronaldo oo dhaliyey 14 gool.
–	Waxay Real Madrid FC la ciyaartay Bayern Munich 20 jeer, waxaanay badisay 7 ka mid ah, waxa laga badiyey 11, waxaanay barbar dhac galeen 2 kulan. Real Madrid waxay kulamadaas ka dhalisay Bayern Munich 26 gool, laakiin iyadana waxa laga dhaliyey 33 gool.
–	Bayern Munchen waxay timid Semi-finalka 15 jeer, waxay badisay 10, waxaana laga badiyey 5 ciyaarood.
–	Markii ugu dambeeyey ee Munchen timid Semi-final-ku waxay ahayd xili-ciyaareedkii 2012/2013, markaas oo ay 7-0 ku khaarajisay kooxda Barcelona.
–	Sannadkan kulamadii Champions League ee ay ciyaartay, waxay badisay 7, waxa laga badiyey 1, waxay barbar dhac gashay 2. Waxay dhalisay 24 gool, halka laga dhaliyey 8 gool.
–	Ciyaaryahanka xili-ciyaareedkan tartanka Champions League goolasha ugu badan u dhaliyey Bayern Munchen waa Thomas Muller oo dhaliyey 5 gool.
–	Bayern waxay hore Champions League ula ciyaartay kooxda Real Madrid 20 jeer, waxay badisay 11, waxa laga badiyey 7, waxaanay barbar dhac galeen 2 kulan. Bayern waxay ka dhalisay Real Madrid 33 gool, waxa iyadana laga dhaliyey 26.
–	kooxda Atlético de Madrid waxay timid heerkan Semi-finalka 3 jeer oo hore, waxay badisay 1 ciyaar, waxaana laga badiyey 2 jeer.
–	Xili-ciyaareedkii ugu dambeeyeyey ee Atletico timi Semi-final-ku waxay ahayd 1973/74, markaas oo 2-0 ay ku garaacday kooxda Celtic FC.
–	Sannadkan waxay ciyaartay 10 kulan, waxay badisay 8, waxay barbaraysay 2, lagamana badin.
–	Ciyaaryahahanka ugu gool-dhalinta badan kooxdan tartanka Champions League waa Diego Costa oo u saxeexay 7 gool.
–	Atletico de Madrid iyo Chelsea waxay hore u kulmeen 3 jeer, mar may badisay, hal marna way barbaraysay, marka kalena waa laga badiyey. Saddexaad kulan waxay Atletico dhalisay 6 gool, waxa iyadna laga dhaliyey 7.
–	Kooxda Chelsea FC waxay hore u ciyaartay 6 jeer Semi-final-ka, waxay badisay laba jeer, waxaana laga badiyey 4 kulan.
–	Markiii ugu dambaysay ee ay timid semi-finalku waxay ahayd xili-ciyaareedkii 2011/2012 markaas oo ay 3-2 ku karbaashtay kooxda Barcelona.
–	Xili-ciyaareedkan, kulamadeedii Champions League waxay badisay 7 jeer, waxa laga badiyey 3, wax barbar dhac ahna may gelin. Kulamadaas waxay dhalisay 18 gool, waxaana laga dhaliyey 7.
–	Ciyaaryahannada ugu gool-dhalinta badan Champions League xili-ciyaareedkan kooxda Chelsea, waa Demba Ba, Samuel Eto’o, Fernando Torres oo min 3 gool dhaliyey.
–	Chelsea iyo Atletico waxay hore u kulmeen 3 jeer, hal ciyaar waxa badisay Chelsea, hal ciyaarna waa laga badiyey, hal ciyaarna way barbareeyeen. Saddexdaas jeer, Chelsea waxay dhalisay 7 gool, iyadana waxa laga dhaliyey 6 jeer.
PSG Oo Doonaysa Inay Zidane ku Bedesho Tababare Blanc